DAAWO SAWIRRO: Shirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliya oo si habsami leh uga furmay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Shirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliya oo si habsami leh...
DAAWO SAWIRRO: Shirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliya oo si habsami leh uga furmay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furay shirka, iyadoo hareerihiisa fadhiyaan Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya iyo kan Midowga Afrika.
Shirka iskaashiga Soomaaliya oo ah mid heer caalami ah ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 50 dowladood oo ka mid ah wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, arrimaha looga hadlayo shirkaan waxaa ka mid ah Dhaqaalaha, Amniga, Siyasadda iyo Cadaaladda.
Shirkaan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa maalinta Berri ah waxaa soo xiri doona Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa ka maqan Shirka Maamul Goboledyada Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay ka qayb galka Shirkaasi.
Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka Shirkaasi caalamiga ah ee maanta ka furmay Caasimadda Muqdisho.
Mahdi Maxamed Guuleed
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya
Shirka iskaashiga Soomaaliya
Minneapolis oo lagu soo gebagabeeyay dhegaysiga dacwadda askarigii dilay George Floyd
Madaxweynihii dalka Chad oo dagaal lagu dilay